Oge siri ike anaghị adị, mana ndị isi ike anaghị adị. - Robert H. Schuller - Kwuru Pedia
Oge siri ike anaghị adị, mana ndị isi ike anaghị adị. - Robert H. Schuller
Nkwụsi ike na uche ike nwere ike ịga ogologo ụzọ n’inyere anyị aka ịgabiga n’oge ihe isi ike. Anyị kwesịrị inwe nchekwube na ezi uche. Iche ihu oge siri ike ma pụọ ​​na ya nke ọma anyị kwesịrị ịgbalị ịchọpụta ihe ga-enyere anyị aka ịpụta n'ọnọdụ ahụ.
Ọ bụrụ na naanị otu onye enweghị ike ime nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya mgbe niile itinye mgbako iji gboo oge ihe ọjọọ. Mmadu aghaghi icheta mgbe nile na “Nke a gabu”. Anyị kwesịrị ichere ya na ndidi na olile anya.
Ndị mmadụ ga-amụta ịgabiga oge ihe isi ike na ihe kachasị mkpa ịzụlite nkà iji chee ọnọdụ ọ bụla siri ike ihu bụ ndị na-aghọ ndị isi ike.
Ha bụ ndị ọzọ ndị mmadụ nwere ike ịdabere na mmụọ nsọ site na ya. Ha bụ ndị na-enyere ndị ọzọ aka ịbanye n'ọnọdụ siri ike n'ihi na ha amụtala site na ahụmịhe - nke ahụ bụ ụdị mmụta kacha mma mgbe niile.
Ndị mmadụ na-adigide n'oge ihe isi ike ghọtara n'ezie uru nke ndụ na ọtụtụ ihe, nke anyị na-eji akpọrọ ihe. Ha nọ n’ọnọdụ mgbe ha nwere ike ịchụ ọtụtụ ihe, mana ha siri na ya pụta. Ya mere, ha ji ihe nta dị mkpa kpọrọ ihe n’ezie ma nwee ọtụtụ ihe ha ga-akụ.
Ọ bụrụ n’ị gafefe ụdị ndị isi ike a, gbalịanụ ịmatakwu banyere ihe ndị mere ha ma mụta ihe na ha; ya mere, nwee nghọta n’ime ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - ata ahụhụ ụbọchị ọ bụla.
Strongbụ Isi okwu
Inweta Ihe isi ike n’oge
Akwụkwọ akụkọ siri ike
Oge siri ike kwuru na okwu
Nọgidenụ na-aga Quot na okwu
Banye Banyere Oge
Kwuru Banyere Oge ojoo
Kwuru maka Banyere Oge Ochie
Otu banyere ike n'oge oge ihe isi ike
Quotes Short Short English
Oge ufodu ndu siri ike
Isi okwu oge niile
Ndị Isi Ike Kwuru
Quotes siri ike
Oge Oge Siri ike
Mgbe Ndụ Na-esiri Quotes ike
Ka olileanya gị, ọ bụghị ihe mgbu gị, kpụzie ọdịnihu gị. - Robert H. Schuller
Ka olileanya gị, ọ bụghị ihe mgbu gị, kpụzie ọdịnihu gị. - Robert H. Schuller Ihe ndị ọzọ metụtara:
Ihe ndi emere taa bu ihe anaghi ekwe omume ụnyaahụ. - Robert H. Schuller
Mgbe ị nwere ebumnuche, ma ị na-arụ ọrụ na -aga n'ihu, oge ụfọdụ ma ọ bụ nke ọzọ, ị ga ahụ…
Lelee anya mgbe niile n'ihe ị hapụrụ. Ya adịla mgbe ị ga-elele ihe furu efu. - Robert H. Schuller
Nkwupụta a chọrọ ka ị megide ikike kachasị ike nke ọdịdị mmadụ ma zụlite ọhụụ…